Wafdi ka socday IGAD oo gaaray Jowhar. – Hornafrik Media Network
Wafdi ka socday IGAD oo gaaray Jowhar.
By HornAfrik	 On Apr 22, 2019
Jowhar-Hornafrik-Madaxweynaha Dowladda Goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay la taliye sare dhinaca Siyaasada Wakiilka IGAD ee Soomaaliya, badda cas iyo Badweynta Hindiya Mudane Cabdikariim Maxamed Daahiye oo gaaray xarunta Dowlad Goboleedka Hirshabelle Jowhar, waxaana ay ka wada hadleen arrimo kale duwan.
Madaxweynaha iyo la taliyaha ayaa ka wada hadlay siyaasadda Guud ee dalka iyo xoojinta xasiloonida Siyaasadeed ee Soomaaliya, waxaana Mr. Daahiye uu ka hadlay doorka IGAD ee Soomaaliya.
Sidoo kale Madaxweyne Waare ayaa ka hadlay xaalada abaaraha ka jira deegaannada Hirshabeelle iyo sidii loo caawin lahaa dadka saameynta ay ku yeelato abaarta iyo biyo la’aanta ka jirta, waxaana dhinaca kale uu dul istaagay muhiimada ay u leedahay Hirshabeelle in lagala shaqeeyo arrimaha amniga, islamarkaana la xoojiyo doorka Ciidamada AMISOM ee xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka argagaxisada.
La Taliye Sare Wakiilka IGAD ee Soomaaliya Cabdikariim Maxamed Daahiye ayaa sheegay in IGAD mar walbo ay diyaar u tahay in Hirshabeelle ay kala shaqeeyso Horumarinta, iyo dhisida hey’adaha Dowladda, iyo sidoo kale arrimaha bini’aadanimada sidii looga gacan siin lahaa.
Ciidamada Booliska oo xalay Baaritaano ka sameeyay Degmada Hodan.